हिँउ विच्छ्याएको मुक्तिनाथ पुग्दा …. – भिजिट नेपाल २०२०
भदौ-असोजको समयावधीलाई ‘पर्यटकीय सिजन’ मानिन्छ । यस सिजनमा मौसम खुला र सफा हुनाले हिँडडुल एवं दृश्यावलोकनमा सहज हुन्छ । यस्तै सिजनको मौका छोप्दै म पटक-पटक मुक्तिनाथ उक्लिएको छु । यसपटक भने जाडो सिजनमा मुक्तिनाथको यात्रा थालियो । यो यात्रा मेरो छैंटो पटक थियो । हिँउले सेताम्मे भएको बेला मुक्तिनाथ पुग्दा अरु बेलाभन्दा भिन्न अनुभव भयो ।
अक्सर म सोचिरहेको हुन्थें कि, हिँउले ढपक्क ढाकेको बेला मुक्तिनाथ कस्तो देखिएला ? यसपाली यहीँ जिज्ञासा मेटियो
यात्रा माघको पहिलो हप्ता सुरु भयो । लप्राकका मित्र गम बहादुर गुरुङ र बेस क्याम टेकका सुनिल श्रेष्ठले मुक्तिनाथ जाने साइत निकाले । मैले दोभाषेको रुपमा यात्राको सहयात्री बन्न पाएँ ।
मुक्तिनाथको बखान धेरै गरिरहनुपर्दैर्न । देश-विदेशमा यसको ख्याती छ । मुक्तिनाथ नजिकै अर्को आकर्षक गन्तव्य छ, जोग । जोगका सम्बन्धमा भने त्यती प्रचार भएको छैन, जति हुनुपथ्र्यो । यसपाली हामी मुक्तिनाथ हुँदैजोगसम्म पुग्ने जमार्को गर्दैछौं ।
हाम्रा यात्रामा फ्रान्स टीभीका १२ जना पत्रकार छन् ।
पहिलो दिन काठमाडौंदेखि पोखरा हवाइजहाज, तत् पश्चात जोमसोमसम्म सवारीमा । जोमसोमदेखि कागवेनीसम्म जिपमा गयौं । त्यसपछि भने हिउँले हाम्रो बाटो छेक्यो । हामी जोङसम्म घोडामा जाने भयौं । ‘सेक्रेट पाथ’ नामक वृत्तचित्र छायांकनका लागि जोङ पुगेको हामी तीनसम्म जोगमा नै बस्यौं ।
हिउँले गाउँ ढपक्क ढाकेको छ । जोङ गाउँबाट धौलागिरी हिमाल मनमोहक देखिन्छ । जोङ गाउँ कला संस्कृतिका हिसावले पनि निकै धनी रहेछ । यहँाका गुम्बाहरु निकै पुराना रहेका छन् । अनलाइनखबरबाट
अध्यक्ष, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाँउपालिका
जोङ मुक्तिनाथ क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावना बोकको क्षेत्र हो । करिब ४० घर रहेको जोङ गाँउ पुग्न कागवेनीदेखि सवारी साधनमा २० देखि २५ मिनेट लाग्छ ।
सवारी साधनमा सहजै पुग्न सकिने भएका कारण पनि यो सम्भावाना बोकेको क्षेत्र हो । यहाँदेखि सुन्दर हिमालका दृश्यहरु अवलोकन गर्न सकिन्छ । तर जती चर्चा हुनुपर्ने हो भएको छैन । अब हामी यसको प्रर्वद्धनमा जुटेका छौं ।
हिउँदको समयमा हिउँले ढपक्क ढाकेको हुन्छ भने अन्य समयमा यहाँको सुन्दरता पनि लोभलाग्दो छ । यो क्षेत्रमा बर्षौं पुराना गुम्बाहरु भएका कारण धार्मिक हिसावले महत्वपूर्ण मानिन्छ ।